ဂျူဗင်တပ်စ်ရဲ့ကွင်းမှာ မန်ယူအသင်း ရုန်းကန်ရဖို့ရှိနေတယ်
ဂျူဗင်တပ်စ်ကွင်းမှာ မန်ယူ ရလဒ်ကောင်း ရယူနိုင်ပါ့မလား
7 Nov 2018 . 4:56 PM
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ် (၄) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပွဲတွေမှာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ ပါဝင်နေပြီး ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံးက ဂျူဗင်တပ်စ်-မန်ယူပွဲပါပဲ။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ အုပ်စုက တက်ဖို့ အခြေအနေကောင်းနေပေမယ့် မန်ယူအသင်းကတော့ လက်ကျန်(၃)ပွဲမှာ အမှားလုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ တခြားပွဲတွေမှာ မန်စီးတီး-ရှက်တာဒိုးနက်၊ ဗလင်စီယာ-ယန်းဘွိုင်းစ်၊ ပါလ်ဇန်-ရီးယဲလ်တို့ရဲ့ပွဲတွေကလည်း အကြိတ်အနယ်ရှိမှာ အသေအချာပါပဲ။
ဂျူဗင်တပ်စ် – မန်ယူ (ကြာသပတေးနေ့ မနက် ၂း၃၀ နာရီ)
(၃)ပွဲကစား ပွဲတိုင်းအနိုင်ရခဲ့ပြီး အုပ်စုကတက်ဖို့ ဂျူဗင်တပ်စ် အခြေအနေကောင်းနေပါပြီ။ မန်ယူအသင်းကတော့ ဒီပွဲမှာ ရှုံးလို့မရဘဲ အနည်းဆုံးသရေတစ်မှတ် ရမှ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ မျှော်လင့်နိုင်မှာပါ။ လက်ကျန်ပွဲတွေမှာလည်း ဗလင်စီယာ(အဝေး)၊ ယန်းဘွိုင်းစ်(အိမ်)တို့နဲ့ ကစားရဦးမှာဖြစ်လို့ ရုန်းကန်မယ့်အနေအထားပါပဲ။ ပထမအကျော့တုန်းက မန်ယူကို ဂျူဗင်တပ်စ် အသာစီးက ကစားနိုင်ခဲ့သလို ဒီတစ်ကြိမ် အိမ်ကွင်းမှာလည်း အသာရဖို့ မခက်ပါဘူး။ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဒီပွဲမှာတော့ ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ ရှိနေတယ်။ နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ မန်ယူ ခြေပြန်တက်လာပေမယ့် ကွင်းလယ်နဲ့ ခံစစ်မှာ အမှားများနေဆဲပါ။ ဒီခံစစ်ပုံစံနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ် တိုက်စစ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ တောက်လျှောက် ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ မာစီယဲလ် Martial ကိုသာ ဂျူဗင်တပ်စ် ခံစစ် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ရင် မန်ယူ တိုက်စစ်က အသက်မဲ့သွားနိုင်တယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်ကိုပဲ ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပြီး မန်ယူအတွက် အမြင့်ဆုံး သရေတစ်မှတ်သာ မျှော်လင့်ရမှာပါ။
မန်စီးတီး – ရှက်တာဒိုးနက် (ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၂း၃၀ နာရီ)
မန်စီးတီးအတွက် မခက်ခဲနိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်ပေမယ့် ပေါ့ဆလို့တော့ မရဘူး။ ဒီအုပ်စုမှာ မန်စီးတီးက (၆)မှတ်၊ လိုင်ယွန် (၅)မှတ်၊ ဟော့ဖန်ဟင်မ်နဲ့ ရှက်တာဒိုးနက်တို့က (၂)မှတ်စီ ရထားလို့ အသင်းတိုင်းက နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ အသက်ရှိနေသေးတယ်။ ဒီပွဲနိုင်လိုက်ရင်တော့ မန်စီးတီး အုပ်စုက တက်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများသွားပါပြီ။ အဝေးကွင်းမှာ ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့သလို အခု အိမ်ကွင်းမှာလည်း မန်စီးတီး အနိုင်ရဖို့ သေချာပေမယ့် ဂိုးပြတ်ဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး။
ပါလ်ဇန် – ရီးယဲလ် (ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၂း၃၀ နာရီ)
ရီးယဲလ် ယာယီနည်းပြ ဆိုလာရီ Santiago Solari အတွက် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာမယ့်ပွဲပါ။ အခုလောလောဆယ် ဆိုလာရီဟာ (၂)ပွဲကစား (၂)ပွဲနိုင် ပေးဂိုးမရှိအောင် စွမ်းဆောင်ထားနိုင်တယ်။ ပါလ်ဇန်က အဆိပ်မရှိပေမယ့် အိမ်ကွင်းမှာ ရီးယဲလ်ကို ဒုက္ခပေးဖို့ ကြိုးစားဦးမှာပဲ။ ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေ ရှိနေလို့လည်း ဒီပွဲကို အင်ပြည့်အားပြည့် ကစားနိုင်ပါ့မလား စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ရီးယဲလ် ခက်ခက်ခဲခဲ ကစားပြီးမှ အနိုင်ရဖို့ များပါတယ်။
ဗလင်စီယာ – ယန်းဘွိုင်းစ် (ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၀၀း၂၅ နာရီ)
ပထမအကျော့မှာ ယန်းဘွိုင်းစ်ကို အနိုင်ရခဲ့ရင် ဗလင်စီယာအခြေအနေ ကောင်းမှာဖြစ်ပေမယ့် သရေကျခဲ့လို့ နစ်နာခဲ့ရတယ်။ အခုပွဲမှာတော့ ဗလင်စီယာ အမှားမခံလောက်ပါဘူး။ တစ်ဖက်မှာလည်း ဂျူဗင်တပ်စ်-မန်ယူ ဆုံတွေ့နေလို့ ဒီပွဲကို အမှတ်ပြည့်ရမှဖြစ်မှာပါ။ (၃)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ နိုင်ပွဲမရှိသေးတဲ့ ဗလင်စီယာ ပထမဆုံး(၃)မှတ်ကို အရယူသွားဖို့ များပါတယ်။
02:30FC Bayern München ? – ? AEK Athens
02:30Benfica ? – ? Ajax
02:30Lyon ? – ? Hoffenheim
02:30Manchester City ? – ? Shakhtar Donetsk
00:25CSKA Moscow ? – ? Roma
02:30Viktoria Plzen ? – ? Real Madrid
00:25Valencia ? – ? Young Boys
02:30Juventus ? – ? Manchester United
Photo:World in Sport,Flipboard,Evening Standard
ဂြူဗငျတပျဈကှငျးမှာ မနျယူ ရလဒျကောငျး ရယူနိုငျပါ့မလား
ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျ (၄) ဗုဒ်ဓဟူးနပှေဲ့တှမှော ပှဲကွီးပှဲကောငျးတှေ ပါဝငျနပွေီး ပရိသတျစိတျဝငျစားမှု အမြားဆုံးက ဂြူဗငျတပျဈ-မနျယူပှဲပါပဲ။ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ အုပျစုက တကျဖို့ အခွအေနကေောငျးနပေမေယျ့ မနျယူအသငျးကတော့ လကျကနျြ(၃)ပှဲမှာ အမှားလုပျလို့ မရတော့ပါဘူး။ တခွားပှဲတှမှော မနျစီးတီး-ရှကျတာဒိုးနကျ၊ ဗလငျစီယာ-ယနျးဘှိုငျးဈ၊ ပါလျဇနျ-ရီးယဲလျတို့ရဲ့ပှဲတှကေလညျး အကွိတျအနယျရှိမှာ အသအေခြာပါပဲ။
ဂြူဗငျတပျဈ – မနျယူ (ကွာသပတေးနေ့ မနကျ ၂း၃၀ နာရီ)
(၃)ပှဲကစား ပှဲတိုငျးအနိုငျရခဲ့ပွီး အုပျစုကတကျဖို့ ဂြူဗငျတပျဈ အခွအေနကေောငျးနပေါပွီ။ မနျယူအသငျးကတော့ ဒီပှဲမှာ ရှုံးလို့မရဘဲ အနညျးဆုံးသရတေဈမှတျ ရမှ နောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ မြှျောလငျ့နိုငျမှာပါ။ လကျကနျြပှဲတှမှောလညျး ဗလငျစီယာ(အဝေး)၊ ယနျးဘှိုငျးဈ(အိမျ)တို့နဲ့ ကစားရဦးမှာဖွဈလို့ ရုနျးကနျမယျ့အနအေထားပါပဲ။ ပထမအကြော့တုနျးက မနျယူကို ဂြူဗငျတပျဈ အသာစီးက ကစားနိုငျခဲ့သလို ဒီတဈကွိမျ အိမျကှငျးမှာလညျး အသာရဖို့ မခကျပါဘူး။ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့တဲ့ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဒီပှဲမှာတော့ ဂိုးသှငျးနိုငျဖို့ ရှိနတေယျ။ နောကျပိုငျးပှဲတှမှော မနျယူ ခွပွေနျတကျလာပမေယျ့ ကှငျးလယျနဲ့ ခံစဈမှာ အမှားမြားနဆေဲပါ။ ဒီခံစဈပုံစံနဲ့ ဂြူဗငျတပျဈ တိုကျစဈကို ထိနျးခြုပျဖို့ ခကျပါတယျ။ တောကျလြှောကျ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ မာစီယဲလျ Martial ကိုသာ ဂြူဗငျတပျဈ ခံစဈ ထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့ရငျ မနျယူ တိုကျစဈက အသကျမဲ့သှားနိုငျတယျ။ ဂြူဗငျတပျဈကိုပဲ ရှေးခယျြရမှာဖွဈပွီး မနျယူအတှကျ အမွငျ့ဆုံး သရတေဈမှတျသာ မြှျောလငျ့ရမှာပါ။
မနျစီးတီး – ရှကျတာဒိုးနကျ (ကွာသပတေးနေ့ နံနကျ ၂း၃၀ နာရီ)
မနျစီးတီးအတှကျ မခကျခဲနိုငျတဲ့ပှဲဖွဈပမေယျ့ ပေါ့ဆလို့တော့ မရဘူး။ ဒီအုပျစုမှာ မနျစီးတီးက (၆)မှတျ၊ လိုငျယှနျ (၅)မှတျ၊ ဟော့ဖနျဟငျမျနဲ့ ရှကျတာဒိုးနကျတို့က (၂)မှတျစီ ရထားလို့ အသငျးတိုငျးက နောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ အသကျရှိနသေေးတယျ။ ဒီပှဲနိုငျလိုကျရငျတော့ မနျစီးတီး အုပျစုက တကျဖို့ ရာခိုငျနှုနျးမြားသှားပါပွီ။ အဝေးကှငျးမှာ ဂိုးပွတျအနိုငျရခဲ့သလို အခု အိမျကှငျးမှာလညျး မနျစီးတီး အနိုငျရဖို့ သခြောပမေယျ့ ဂိုးပွတျဖို့တော့ မဖွဈနိုငျလောကျပါဘူး။
ပါလျဇနျ – ရီးယဲလျ (ကွာသပတေးနေ့ နံနကျ ၂း၃၀ နာရီ)
ရီးယဲလျ ယာယီနညျးပွ ဆိုလာရီ Santiago Solari အတှကျ စိနျချေါမှုဖွဈလာမယျ့ပှဲပါ။ အခုလောလောဆယျ ဆိုလာရီဟာ (၂)ပှဲကစား (၂)ပှဲနိုငျ ပေးဂိုးမရှိအောငျ စှမျးဆောငျထားနိုငျတယျ။ ပါလျဇနျက အဆိပျမရှိပမေယျ့ အိမျကှငျးမှာ ရီးယဲလျကို ဒုက်ခပေးဖို့ ကွိုးစားဦးမှာပဲ။ ရီးယဲလျအသငျးမှာ ဒဏျရာပွဿနာတှေ ရှိနလေို့လညျး ဒီပှဲကို အငျပွညျ့အားပွညျ့ ကစားနိုငျပါ့မလား စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ ရီးယဲလျ ခကျခကျခဲခဲ ကစားပွီးမှ အနိုငျရဖို့ မြားပါတယျ။
ဗလငျစီယာ – ယနျးဘှိုငျးဈ (ကွာသပတေးနေ့ နံနကျ ၀၀း၂၅ နာရီ)
ပထမအကြော့မှာ ယနျးဘှိုငျးဈကို အနိုငျရခဲ့ရငျ ဗလငျစီယာအခွအေနေ ကောငျးမှာဖွဈပမေယျ့ သရကေခြဲ့လို့ နဈနာခဲ့ရတယျ။ အခုပှဲမှာတော့ ဗလငျစီယာ အမှားမခံလောကျပါဘူး။ တဈဖကျမှာလညျး ဂြူဗငျတပျဈ-မနျယူ ဆုံတှနေ့လေို့ ဒီပှဲကို အမှတျပွညျ့ရမှဖွဈမှာပါ။ (၃)ပှဲကစားပွီးခြိနျမှာ နိုငျပှဲမရှိသေးတဲ့ ဗလငျစီယာ ပထမဆုံး(၃)မှတျကို အရယူသှားဖို့ မြားပါတယျ။